ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » Tinder နှင့်အခြား Mobile Apps နှင့်အတူချိန်းတွေ့ဘို့အကြောင်းသိကောင်းစရာများ
Tinder နှင့်အခြား Mobile Apps နှင့်အတူချိန်းတွေ့ဘို့အကြောင်းသိကောင်းစရာများ
သောအခါရက်စွဲအချိန်လည်းရှိ၏, လူနှစ်ဦးသည်လူတစ်ဦးအတွက်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားခရီးဦးကြိုပြုခြင်းခဲ့; ထို့နောက်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့လာကြ၏; နှင့်ယခုအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အသစ်တစ်ခုဌာနခွဲရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်မိုဘိုင်း application မှတဆင့်ချိန်းတွေ့င်.
နှစ်ပေါင်း၏နောက်ဆုံးဇနီးမောင်နှံသည်ထိုကဲ့သို့သော apps တွေရဲ့အရေအတွက်ပစ်လွှတ်မျက်မြင်ပါပြီ; သူတို့အား apps များအများစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကောင်းဆုံးအရာသူတို့ကုန်ကျစရိတ်အခမဲ့ download ရယူနိုင်တယ်ခြင်းဖြစ်သည်.
Tinder ဖြစ်နိုင်လူကြိုက်အများဆုံးအခမဲ့ချိန်းတွေ့ App ဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်, စကအတော်လေးကျယ်ပြန့်အသုံးပြုကြတဲ့က၎င်း၏မျိုးအခြားသူများစွာရှိပါတယ်; ဥပမာတွေပတ္တာများပါဝင်, OkCupid, ကော်ဖီ Bagel တွေ့ဆုံ, ငါး၏ပဒေသာ, နောက် ... ပြီးတော့.
Tinder နှင့်အခြားမိုဘိုင်း apps များနှင့်အတူတစ်ယောက်နှင့်ချိန်းတွေ့စဉ်အခါအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောတစ်ဦးလိုက်နာရမည့်အချက်တချို့အကြံပြုချက်များမှာ.
ညာဘက်ဓါတ်ပုံ Pick: သင်သေချာမသက်ဆိုင်ဘဲမူလသင်အသုံးပြုနေတဲ့ချိန်းတွေ့ app ၏သင်၏ဓာတ်ပုံကောက်ရပါမည်; ကောင်းတစ်ဦးဓာတ်ပုံအလားအလာချိန်းတွေ့လက်တွဲဖော်များရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုသိမ်းပိုက်မှုများမှာများစွာသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်. သို့သော်, သင် Tinder ကိုအသုံးပြုနေလျှင်ညာဘက်ပုံများရှိခြင်းသည် ပို. ပင်အရေးကြီးဖြစ်လာ, ဓာတ်ပုံတပုံ-based app ကိုအရာဖြစ်ပါသည်.
Tinder တွင်, စုံလင်သောပွဲစဉ်ကိုရှာဖွေသင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုသင်၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ profile ဓါတ်ပုံတွေအပေါ်အများအားဖြင့်မူတည်. တစ်ဦးကမကောင်းတဲ့ပရိုဖိုင်းပုံကိုသင်၌ပိုမိုစိတ်ဝင်စားကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်အားလုံးထဲကသင့်ရဲ့အလားအလာပွဲများကိုရပ်တန့်စေခြင်းငှါ,.
အကောင်းဆုံးကတော့, သင် Tinder အပေါ် upload ကိုပထမဦးဆုံးပရိုဖိုင်းပုံကိုသင်၏မျက်နှာတစ်ခုဆွဲဆောင်မှုဓာတ်ပုံဖြစ်သင့်, ဒုတိယပရိုဖိုင်းပုံကိုသင့်ရဲ့အရပ်အမောင်းကိုပြသဖို့သင့်ပြီးတတိယတစ်ဦးကသင့်လူနေမှုပုံစံစတဲ့သို့မဟုတ်ဝါသနာတခုအဖြစ်နိုင်.
သင်ပြုဘယ်တော့မှမသငျ့အရာတစ်ခုမှာ, သင်တစ်ဦးသောမိန်းမဖြစ်ကြောင်းကိုအထူးသဖြင့်ဆိုရင်, ဆိတ်သငယ်ကိုအဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကို၏ဓါတ်ပုံများကိုလွှတ်တင်ဖြစ်ပါတယ်; ပို့စ် selfies နှင့် cheesy tit ရိုက်ချက်လည်းရှောင်ရှားသင့်သည်.
သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်ကိုဖေါ်ပြချက်ရေးသားခြင်းတဲ့အခါသတိထားပါ: သင်ချိန်းတွေ့အလေးအနက်ကြသောအခါ, သင်သည်ကိုယ်ကိုလှည့်ပတ်နေတဲ့လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ် aura ဖန်တီးဖို့ကြိုးစားဘယ်တော့မှမပေးသင့်.
သင်တစ်ဦးချိန်းတွေ့ app ကိုအသုံးပြုနေတယ်တောင်မှကစိတ်ထားပါ, သင့်ရဲ့အဆုံးစွန်ရည်မှန်းချက်ကလူရင်ဆိုင်ရ-To-မျက်နှာတွေ့ဆုံပါတယ်; ဒါကြောင့်, သင်တို့သည်မယ့်သူတစ်ဦးအဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမုသာသို့မဟုတ်ပုံဖော်မရှိပါပွိုင့်ရှိတယ်.
သင်နှင့် ပတ်သက်. အရာအားလုံးအကောင်းမပါရှိလျှင်, သင်နှင့် ပတ်သက်. စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးအချက်များ၏စာရင်းတစ်ခုမဖြစ်စေသင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းဖော်ပြချက်ထဲတွင်သူတို့ကိုထည့်သွင်း. သင်၏အသက်တာ၏စိတ်ဝင်စားဖွယ်အကောင်းဆုံးမျက်နှာစာကိုချွတ်ပြသနိုင်ဖို့တွန့်ဆုတ်မထားပါနဲ့, ဥပမာအားဖြင့်သင်ကစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဝါသနာရှိပါက, အသေးစိတ်အတွက်ကြောင့်အကြောင်းပြောဆို.
နှမ်းတစ် bit နဲ့အတူလူကအမြဲတမ်းပိုလူကြိုက်များသကဲ့သို့သင်တို့လည်းအနည်းငယ်သတ္တိရှိနိုင်ပါသည်.
အမြဲတမ်းအတုံ့ပြန်: သင်သည် Tinder ပေါ်တွင်မက်ဆေ့ခ်ျကိုရကြပြီ (သင်အသုံးပြုနေတဲ့သို့မဟုတ်အခြားမိုဘိုင်း app ကိုချိန်းတွေ့), ဒါပေမယ့်သတင်းစကားပေးပို့ခြင်းလူတစ်ဦးလောက်သင်သည်စွဲမက်စရာမှမပြဘူး. ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးတွင်, အစားပြန်ကြားချက်ကိုပေးပို့တာကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်း၏, သင်ကအခြားလူတစ်ဦးကိုသင်စိတ်ဝင်စားမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုသိစေရမယ်.
သင့်ရဲ့စာတွေကိုအချိန်ကို Learn: ဒီအစွန်အဖျားမိန်းမတို့အဘို့အထူးအရေးကြီးပါတယ်; သို့သော်, အချို့သောအခြေအနေများအောက်တွင်, ယောက်ျားတို့သည်လည်းသူတို့စေလွှတ်မည်စာတွေကိုအချိန်ကိုက်ခန့်သတိထားသင့်.
ကတနင်္ဂနွေဆိုရင်, အမျိုးသမီးများပြီးနောက်စာတိုပို့ network ပေါ်ကိုတက်လာတဲ့အစပြုကိုရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ် 10 p.m., ထိုသူတို့သည်မိမိတို့အတက်ချိတ်ဖို့ရှာကြသည်သာလျှင်ပြုနိုင်သည်.
အဲဒီအကြံပြုချက်ကိုသင်အခုအချိန်မှာ Tinder အပေါ်ပြီးပြည့်စုံသည့်ပွဲစဉ်သို့မဟုတ်စစ်ဆင်ရေးများတွင်မဆိုအခြားမိုဘိုင်းချိန်းတွေ့ app ကိုရရန်ကူညီမျှော်လင့်. ကိုယ့်ဟာကိုယ်သိပ်အရာအဆောတလျင်မသေချာအောင်; စိတ်တွင်အဟောင်းများကိုအလေးချိန်ကိုစောင့်ရှောက်: “နှေးနှေးနှင့်တည်ငြိမ်အနိုင်ပေးပြိုင်ပွဲ”.
ပွင့်လင်း Relationships အဆင်ပြေဖို့ကိုဘယ်လို
Yappily Ever ပြီးနောက်: သင်က 'Blend မိသားစု' 'အဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား?
5 Long ကအဝေးသင်ဆက်ဆံရေးဆက်လက်တည်ရှိရန်အကြောင်းသိကောင်းစရာများ – ကျောင်းသားသမဂ္ဂ Edition ကို
the Dog တို့ Park ကို မှစ. တစ်စုံတစ်ယောက်ကချိန်းတွေ့ဖို့ကိုဘယ်လို